US neChina vanosaina chibvumirano chitsva chekutengeserana kuti vadzivise mitero pahunyanzvi | Linux Vakapindwa muropa
Kwemakore maviri hondo yekutengeserana pakati peUnited States neChina zvave kuitika, zvinova zvakatungamira kune yakateedzana yezvinetso kune kunze kwenyika Izvi zvakakanganisa zvakanyanya zvikamu zvinoverengeka, kusanganisira iyo tekinoroji chikamu.
Kunze kweizvozvo muhondo yekutengeserana iyi kwete chete ivo vakakanganiswa asiwo nedzimwe nyika uye Kwete izvozvo chete, isu tinogona zvakare kurangarira iyo Huawei kesi imomo aibatanidzwa nekuda kwekufamba kwakasiyana kwakaitwa nemutungamiriri weUnited States. Tinogona zvakare kurangarira RISC-V Sarudzo yekushandura dzimbahwe rayo kubva kuUSA kuenda kuSwitzerland nekuda kwekutya kwekutengesa.
Asi zvese izvi zvinoita kunge zvapera kubvira Chitatu chapfuura chibvumirano chekutengeserana chakasainwa kusarura pakati pesimba guru muWashington.
Musangano uyu Iyi nhanho nyowani muhukama hwekutengesa pakati peWashington neBeijing mushure memakore maviri echinyakare masanctions uye ekutsiva matanho kukambani dzenyika mbiri.
Pasi pemitemo yechibvumirano chitsva, Beijing ichatenga muzvinhu zveAmerica nemasevhisi kwemakore maviri anotevera, anokosha madhora zviuru mazana maviri emadhora.
Kuwedzera kwekutenga kuchafananidzwa ne2017, isati yatanga hondo yekutengeserana. Sekureva kweCNN Bhizinesi, China yakapinza inodarika $ 185 bhiriyoni muzvinhu zveUS nemasevhisi akazara gore iro.
Sekureva kweshumo imwe chete, kweanopfuura makore maviri, kutenga kwakadzikira kweChina kwaizotungamira mukuwedzera kwakanyanya kwekutengeswa kweUS, zvakazara. Hwekunze kutengesa kunze kuChina kwaizokwira kusvika pamadhora anodarika mazana mazana maviri nemakumi maviri emadhora mu260 uye kusvika pamadhora mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matatu emadhora muna 2020 kana chibvumirano chikaramba chichienderera.
"Tinotenda kuti zvakaoma kwazvo kuti China ipinze madhora mazana maviri emadhora ekuwedzera zvinhu nemasevhisi kubva kuUnited States mukati memakore maviri anotevera pasina kudzora kutengwa kubva kune imwe nzvimbo," vakadaro vaongorori veUBS, kambani yemabasa emari.
Chibvumirano ichi chinopa zvakare kuzorodza tsika dziripo pazvikamu zvakasiyana zvezvinhu zvinounzwa kunze uye tidzivise kumisikidzwa kwezvitsva.
Chibvumirano chinobatsira vatengi
Pasi pechibvumirano, mitero yezvinhu zvinosvika madhora zana nemakumi masere emadhora ichave nehafu kubva padanho ravo razvino re15% kusvika 7.5%. Rondedzero yezvinhu irikubhadharwa panguva ino ye15% mwero inosanganisira zvigadzirwa zvinoverengeka zvetekinoroji, senge materevhizheni, mahedhifoni, monita, pakati pevamwe.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yevatengi emagetsi, senge malaptop uye mapiritsi, monitori uye zvimwe zvinongedzo, vhidhiyo yemitambo yekunyaradza uye mafoni emafoni, angave ari pasi peyero nyowani ye25% muna Zvita apfuura.
Asi iyi mitero pahunyanzvi yakadzivirirwa. Panguva iyoyo, iyo indasitiri yemitambo yevhidhiyo, pakati pevamwe, yakanga yakumbira manejimendi kuti isunungure zvigadzirwa zvayo kubva pamubhadharo, ichipokana kuti mutengo unoguma unowedzera
"Vaizokuvadza vatengi, vagadziri vemitambo. Vhidhiyo, yevatengesi uye vagadziri veconsoon, inogona kukanganisa zviuru zvemabasa akakosha uye anopa mubayiro muUnited States uye inokanganisa hunyanzvi muindasitiri yedu nekunze."
Kunyange zvakadaro pasi pechibvumirano chitsva, hakuzove nemari nyowani pama tekinoroji, Mazhinji emitero yakambomisikidzwa acharamba achishanda. Izvi zvinosanganisira iyo yekuwedzera makumi maviri neshanu emitero yakawedzerwa muna25 pazvinhu zvinounzwa kunze kwenyika zvema semiconductors, modem, uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi.
Beijing neWashington ivo vafungawo, muchikamu chechibvumirano chavo chitsva, chivakwa chehungwaru uye kumanikidza tekinoroji kuchinjisa
Muchokwadi, China inowanzoda kuti makambani ekunze aite iyo inoshanda munyika vanoita zvavanoita kuburikidza nekubatana. Aya makambani anodzoreredza hunyanzvi hwemukati matekinoroji, zvakavanzika zvekutengeserana, kunyanya kumakambani emuno eChinese. Makambani eUS uye mamwe makambani epasi rese anotambira mamiriro akadaro kuti apinde mumusika unobatsira weChina.
Asi Nechibvumirano chitsva chekutengeserana, maitiro aya anozotadziswa zvakanyanya. Chibvumirano chinotsanangura kuti chero mamiriro ekuchinjisa kana rezinesi pakati pekambani dzeUS neChinese
"Inofanirwa kunge yakavakirwa pamamiriro ezvinhu emusika ari ekuzvidira uye anoratidza kubvumirana."
Hapana bato muchibvumirano, ndiko kuti, United States neChina,
"Zvinoda kana kumanikidza, zvakarongeka kana zvisina kurongwa, kune vamwe vanhu vebato kana makambani kuti vaendese tekinoroji kuvanhu vavo semamiriro" ekutambira mvumo yekushanda mumusika webato, "chibvumirano chinodaro.
Pakupedzisira zvinoramba zvichionekwa kuti zvinodiwa muchibvumirano chitsva ichi zvichaitwa sei pamativi ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IUS neChina vanosaina chibvumirano chitsva chekutengeserana kuti vadzivise mitero pahunyanzvi
Hure hure! .. Ndini here ini, kana mumwe munhu anoona VaChino seWhiteRose kubva kuna Mr. Robhoti!
Iyo nyowani vhezheni yeMidnight Commander 4.8.24 yakatoburitswa kare